olompirenena – CENI Madagascar
CENI Madagascar > olompirenena
Zo sy andraikitry ny olom-pirenena feno 18 taona no mihoatra rehetra ny raharaham-pifidianana.
Noho izany dia zava-dehibe ny fandraisana anjara feno amin’ izany tontolon’ny fifidianana izany ary tena misy fiantraikany amin’ny raharaham-pirenena ny safidy sy ny latsa-bato izay ataon’ny tsirairay.
Ny lalanafehizoro LF 2018-008 tamin’ny11 may 2018 mikasika ny fitondranaankapobeny ny fifidianana sy ny fitsapankevi-bahoaka,hitaaoamin’nytokovoalohanyandininyfahatelo dia manamafy fa: “Mpifidyavokoarehefamety ho olom-pirenena malagasy, tsy anavahanana lahy na vavy,feno valo ambin’ny folo taona katroka amin’ny vaninandro anaovana ny latsa-bato”.
Olom-pirenena toa anao aho! Koa manomboka izao! raisiko ny adidiko @ maha olom-pirenena ahy! Ary ianao?